वास्तुशास्त्रअनुसार, घरको बाथरुममा राख्नुहोस् निलो बाल्टी, आफै पर्नुहुनेछ चकित ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/वास्तुशास्त्रअनुसार, घरको बाथरुममा राख्नुहोस् निलो बाल्टी, आफै पर्नुहुनेछ चकित !
वास्तुशास्त्रअनुसार, घरको बाथरुममा राख्नुहोस् निलो बाल्टी, आफै पर्नुहुनेछ चकित !
काठमाडौँ। वास्तुशास्त्रकाअनुसार घरको हरेक कोणमा ऊर्जाहरुको बास हुने गर्दछ, चाहे त्यो स कारात्मक उर्जा होस् वा न कारात्मक ऊर्जा नै किन नहोस् नै । यदि सहि ठाउँमा सहि चिजलाई स्थापित गरिएको वा राखिएको छ भने त्यसले मानिसलाई सधैंभरी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्ने गर्दछ ।
त्यसैगरी, मानिसको जीवनलाई रंगहरुले पनि विशेष प्रभाव पार्ने गर्दछ। जसअनुसार, घरको बाथरुममा पनि यदि निलो रंगको बाल्टिन राखियो भने धन लाभदेखि घरमा सुख शान्तिको बास हुने वास्तुशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ।
बाथरुममा निलो बाल्टिन राख्दा हुन्छ यस्तो लाभस्
वास्तुशास्त्रअनुसार बाथरुममा अनेक किसिमको ऊर्जाहरु हुने गर्दछन् जसले जीवनलाई सुखमय र दुखमय दुवै बनाउन सक्दछ । त्यस्तै, नकारात्मक ऊर्जाहरुलाई हटाउन बाथरुममा निलो रंगको बाल्टिन राख्दा घरमा सधैंभरि सुःख शान्ति छाउने गर्दछ। यदि सकिन्छ भने बाथरुमको टाइल्स पनि निलो रंगको भयो भने अत्याधिक लाभ हुने गर्दछ।
बाथरुममा निलो बाल्टिन राख्दा त्यसलाई कहिल्यै पनि खालि राख्नु हुँदैन। बाल्टिनमा जहिल्यै पनि आधा वा पूरा पानी भरेर राख्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा घरमा धनको आगमन वा लाभ हुने गर्दछ। वास्तुशास्त्रअनुसार निलो रंगले राहु र शनि ग्रहलाई शान्त राख्न मद्दत गर्दछ।
त्यस्तै, बाथरुममा निलो रंगको बाल्टि राख्दा सबै राहु तथा शनि दोषहरु नष्ट भनेर जाने र जीवनमा खुसि छाउने गर्दछ। यसैगरी, कसैलाई राहु वा शनिको दोष छ भने उसले जहिल्यै निलो रंगको रुमाल बोक्दा लाभ हुनेगर्दछ।
वास्तुशास्त्रकाअनुसार निलो रंगले थुप्रै लाभ हुनेगर्दछ तर यसले कतिपय मानिसहरुलाई नकारात्मक प्रभाव पनि पर्ने गर्दछ। त्यस्तै, यदि कोहि व्यक्ति डिप्रेशनको शिकार छ भने उसले निलो रंग प्रयोग नगर्नु नै लाभ हुने गर्दछ।